Madaxweynaha Soomaaliya oo Xerada Xalane kula kulmay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Britain (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Xerada Xalane kula kulmay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Britain (Sawirro)
MAREEG 20 February 2014 4 April 2019
Mareeg.com-Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Xerada Xalane, gaar ahaan safaarada Britain ku leedahay halkaas kula kulmay Xildhibaan ka socday Baarlamaanka Britain oo lagu magacaabo Tony Bealdry.
Kulankan ayaa waxaa goob joog ka ahaa Safiirada labada dal ee Soomaaliya iyo Britain C/llaahi Sanbaloolshe iyo Niel Wigan, waxaana Madaxweyaha ugu mahad celiyay Britain doorkooda hormuudka wanaagsan ee arrimaha Soomaaliya
“Aad ayaan uga mahad-celinayaa booqashada Xildhibaanka waxay muujineysaa xirriirka dhow ee ka dhaxeeya labadda Dowladood iyo labada shacab”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha oo sii hadkayay ayaa yiri “Dowladda Ingriiska waxay ka mid tahay Dowladaha teegeeradda la garab-taagan Dowladda Somaaliyeed, waxayna diyaar la yihiin in ay sii wadaan, aad ayuuna u sii xoogeysanayaa xirriirka nagala dhaxeeya Dowladda Ingiriiska.
Madaxweynaha ayaa sheegay in sidoo kale kulanka looga hadlay iskaashiga labadda Dowladdeed iyo sidii dowladda Inagriiska ay kaalin buuxda uga qaadan lahayd mashaariicda hormarineed ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ku ammaanay Dowladda UK inay safaaradeedu ka howlgashay Muqdisho.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Dowladdu ay juhdi xoog leh ku bixineyso xoojinta xirriirka ay la leedahay wadamada Caalamka iyo xasilinta dalka.
Kulamada madaxda dowladda kula qaataan garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo Xerada Xalane mas’uuliyiinta heekooda hooseeya ayaa aad loo dhaliilay, iyadoo siyaasiyiinta ay ku taliyaan bedelkii madax heerkooda hooseeyo lagula kulmi lahaa ay ka wanaagsan tahay in lagu qaabilo Xarunta Madaxtooyada.
Opinion:Is Somali Diaspora community greedy for political power?
R/wsaaraha Soomaaliya oo la kulmay madaxweynaha Uganda iyo madaxweyne ku xigeenka Tanzania